Wax ka ogoow Liiska 10-ka xul ee ugu qaalisan adduunka marka loo eego dhanka qiimaha ay xiddigahooda ka joogaan suuqa kala iibsiga – Gool FM
(World) 14 Okt 2019. Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa daabacay liiska xulalka ugu qaalisan adduunka, marka loo eego qiimaha ay xiddigahooda ka joogaan dhanka suuqa kala iibsiga, sida uu shaaca ka qaaday wargeyska caalamiga ah ee Trastevere Market ee ku caan baxay arrimaha dhanka suuqa.
Warbixinta ayaa ku tiirsaneyd qiimaha suuqa uu soo bandhigay wargeyska caalamiga ah ee Trastevere Market, kuwaasoo ay ku jiraan kaliya ciyaartoyda loogu yeeray inay ka qeyb galaan kulamada caalamiga ah ee haatan la ciyaarayo, balse kuwa kaga maqan kulamadan dhaawacyo ama sababo kale, waxa ay ka baxsan yihiin qiimeyntan.
Xulka qaranka Brazil ayaa hogaaminaya qiimaha suuqa, waxayna guud ahaan gaarayaan hal bilyan iyo 140 milyan oo euro, dabcan xiddiga ugu qiimaha sareeya ayaa ah Neymar Jr marka loo fiiriyo saaxiibadiis kale waana 180 milyan oo euro, waxaa ku xiga Philippe Coutinho oo amaah ahaan ugu dhaqaaqay Bayern Munich, wuxuu ku qiimeysan yahay 90 milyan oo euro, iyadoo xiddiga kooxda Liverpool ee Roberto Firmino qiimo ahaan uu gaarayo 80 milyan oo euro.
Xulka qaranka England ayaa liiskan ka galay kaalinta labaad, waxayna guud ahaan gaarayaan hal milyan 120 kun euro, waxaa jira labo ciyaaryahan ee qiimo ahaan sare u dhaafay 100 milyan oo euro, kuwaas oo kala ah Harry Kane 150 milyan ah, Raheem Sterling 140 milyan ah iyo Jadon Sancho oo 100 milyan ah.
Kaalinta 3-aad waxaa galay xulka qaranka Spain, waxay guud ahaan ku qiimeysan yihiin xiddigaha liiskan qeybta kaga ah 924 milyan oo euro, waxaa ku xiga xulka qaranka France oo iyagana ku qiimeysan 58 milyan oo euro, halka xulka Italy uu ku jiro kaalinta shanaad iyaga oo ku qiimeysan 836 milyan oo euro.
Haddaba halka hoose kaga bogo liiska xulalka ugu qaalisan Adduunka ee dhanka suuqa kala iibsiga:-
Brazil: 1 bilyan iyo 140 milyan euro
England: 1 milyan iyo 120 kun
Spain: € 924 milyan
France: € 866 milyan
Italy: € 836 milyan
Germany: € 803 milyan
Belgium: 754 milyan oo yuuro
Portugal: 752 milyan yuuro
Nederland: 709 milyan oo yuuro
Argentina: € 436 milyan